fampandrosoana no zandriny indrindra amin’izany satria vao 39 taona monja izy. Raha araka ny tafa nifanaovany tamin’ny mpanao gazety dia olona faran’izay sahirana izy fahiny, nipetraka tamin’ny trano plastika saingy nahazo fahasoavana tao Ambohitrimanjaka ary tafarina tamin’ny fiainana. Vonona ny hamaly babena ity kaominina iray ity sy ireo mpiarabelona aminy izy noho izany. Dimy taona monja no hangatahiko hoy, Andriamahefa Razanadrakoto fa ny aorian’izay dia hiverina hikarakara ireo vady aman-janako indray aho. Hojereny ao anatin’izany ny resaka rano fisotro izay tena mampitaraina ny mponina, ny fanamboarana ireo tata-drano eny an-tanimbary, ny asa fanamboaran-dalana izay tsy maintsy hitadiavany mpamatsy vola…Vonona ny hiara-kiasa amin’ny rehetra moa ity kandida iray ity ho fampandrosoana an’Ambohitrimanjaka.